Xiisaha Manchester United Iyo Juventus Ee Upamecano Oo U Weecday Xidig Ka Tirsan Fiorentina
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Xiisaha Manchester United iyo Juventus ee Upamecano oo u weecday Xidig ka...
Sida laga soo xigtay shabakadda wararka Talyaaniga ee Calciomercato , kooxaha Manchester United iyo Juventus ayaa ku jira loolan adag oo ay ku doonayaan inay ku soo xerogeliyaan daafaca kooxda Fiorentina Nikola Milenkovic .
Manchester United ayaa in muddo ah raadineysay xulasho difaac adag oo adag. In kasta oo Harry Maguire uu ilaa iyo haatan ahaa xiddig adag, hadana Eric Bailly iyo Victor Lindelof ayaa la dagaallamaya arrimaha taam ahaanshaha xilli ciyaareedkan.
Dhanka kale, Juventus ayaa raadineysa bedel joogto ah iyo waqti dheer oo ah labada daafac dhexe ee duqoobay ee Chiellini iyo Bonucci.
Daafaca saamaynta leh ee RB Leipzig Dayot Upamecano ayaa sidoo kale lala xiriirinayay labada Manchester United iyo Juventus bilihii lasoo dhaafay, laakiin talaabada ayaa hada umuuqata mid aan macquul aheyn.
Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay u soo baxday inay tahay musharaxiinta hogaamineysa saxiixa ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France, taasoo keentay in labada Manchester iyo Juventus ay raadiyaan bedel.
Wararka ka imanaya Italy ayaa haatan sheegaya in ay kooxaha Man United iyo Juventus labaduba dareenkooda u jeediyeen daafaca dhexe ee kooxda Fiorentina ee Nikola Milenkovic.
Previous articleSidee Liverpool uga hortagi kartaa Kooxda Manchester City, Xidigaha maqan iyo kuwa diyaarka ah
Next articleKhadka dhexe ee Liverpool Fabinho oo ka warbixiyay soo laabashadiisa dhaawaca